ဘယ်လိုပြန်ရှာရမှာလဲ - MYSTERY ZILLION
ကျနော်သုံးနေတာက...vistaပါ..build in speaker ကလာနေတဲ ့အသံကိုမိုက်ခရိုဖုန်းစပီကာထဲကြားချင်တာနှင် ့...အဲဒါ..control panel>hardware&sound အဒီထဲမှာဘာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မိတယ်..မသိတော ့ပါဘူးဗျာ...ခုတော ့အသံကမလာတော ့ဘူး..ပြီးတော ့အပြင်က sound icon လေးမှာကြက်ခြေခတ်အမှတ်သားလေးပြနေတယ်...အဲဒီအပေါ်မြှားလေးသွားတင်လိုက်ရင်တော ့..no audio output device is installed တဲ ့ဗျာ..ခုတော ့:13:ဘယ်လိုလုပ်ရတော ့မလဲဗျာ:2:..သိရင်ကူညီပါအုံး။:106:
December 2007 edited December 2007 Moderators
အေးဗျာ ကိုယ့်လူတို့က တစ်ယောက်လာလည်း vista တစ်ယောက်လာလည်း vista ဒီပြဿနာတွေကို ရှာကြည့်ပေးချင်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်Vista တင်နိုင်တဲ့ system မျိူးမသုံးနိုင်လေတော့ တစ်ခါတစ်လေ Vista လို့အော်နေတဲ့သူတွေကို တောင်မနာလိုဖြစ်ချင်လာတယ် ..။ ရမ်းသမ်းဖြီးလိုက်မယ်နော် ... sound driver အခွေကနေ driver ကို ပြန် install လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွား
မယ်ထင်တယ် ..။(သေချာဘူးနော် )
thuyaaung wrote: »
ကျေးဇူးပါ...sound driver အခွေကကျနော်မှာမရှိဘူးခင်ဗျား...အဲဒါအင်တာနက်ကရနိုင်မလားပဲနော်..။
Windows Update လုပ်လိုက်လေ...
အကုန်လုံးနီးပါး OK သွားမယ်...
Driver တွေ အကုန်ရှာပြီး သွင်းသွားပါလိမ့်မယ်..
ဆိုတာကတော့ driver ပြန်သွင်းဖို့လိုကိုလိုနေပါတယ်..
driver မရှိရင် windows update လုပ်လိုက်ပါ... :67:
Yes , It must be the error of Driver . You must install the sound controller driver.
If you want CD , Go to Service Center and take and buyacopy CD .
First read your mother board Version . this is important fact for CD buying.
moon wrote: »